गुगल एनालिटिक्स सेगमेन्ट - Semalt अभ्यास
जब अरूसँग गुगल एनालिटिक्सको बारेमा छलफल गर्ने कुरा आउँदछ, तपाईंले सुन्नु पर्दछ "म सुझावहरूको खोजी गर्दैछु," "मैले गुगल एनालिटिक्स कहिले पनि प्रयोग गरेको छैन" र अन्य समान चीजहरू छन्। आर्टेम अब्गारियन, Semalt विज्ञ भन्छन् कि Google विश्लेषकमा क्षेत्रहरू प्रयोग गर्नु महत्त्वपूर्ण छ यदि तपाईं आफ्नो वेबसाइटमा पर्याप्त संख्यामा आगन्तुकहरू प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ भने।
खण्ड के हो?
गुगल एनालिटिक्समा, सेगमेन्ट एक विशेष प्रकारको डाटा वा टेकनीक हो जसले तपाईंलाई तपाईंको यातायातको गुणस्तरको कल्पना दिन्छ। गुगल एनालिटिक्सले हामीलाई साइटको सत्र र सत्रको साथसाथै प्रयोगकर्ताहरूको बाउन्स रेटको समग्र प्रदर्शन सुधार गर्न धेरै अवसरहरू प्रदान गर्दछ। यदि तपाइँ कुन प्रकारका पृष्ठहरू वा लेखहरू धेरै हेराईहरू प्राप्त गर्दै छन् र कति साइटहरू कार्बनिक दृश्यहरू प्राप्त गर्दैछन् भन्ने बारेको एक विचार जान्न चाहानुहुन्छ भने तपाईले GA खण्डहरू प्रयोग गरेर गर्नुपर्नेछ। त्यो पनि तपाइँ तपाइँको डेटा कम गर्न मद्दत गर्दछ कि तपाइँ पहिले भन्दा अधिक विशिष्ट र राम्रो ज्ञात परिणामहरू पाउन सक्नुहुन्छ।
तपाईंलाई किन खण्डहरू चाहिन्छ?
मलाई यहाँ भन्नुहोस् कि तपाईंको वेबसाइट र यसको डाटा विभाजन बिना सुरक्षित गर्न वा राम्रोसँग एकत्रित गर्न सकिदैन। यसले तपाइँलाई सही निष्कर्षमा पुग्न मद्दत गर्दछ। विज्ञहरू भन्छन कि समग्रमा सबै डाटा र जानकारी बकवास हो, त्यसैले तपाईंले विभाजन प्राप्त गर्नुपर्नेछ। उदाहरण को लागी, यदि तपाइँ तपाइँको साइट को आगन्तुक को गुणवत्ता सुनिश्चित गर्न चाहानुहुन्छ, तपाइँ तपाइँको Google एनालिटिक्स र यसको डेटा खण्डहरु मा विभाजन र प्रासंगिक फिल्टर बनाउनु पर्छ। डाटा यति जम्मा गरिएको छ कि तपाईं उचित विभाजन बिना कुनै रणनीति बनाउन सक्नुहुन्न। तपाइँ तपाइँको वेबसाइट र उत्पादनहरु लाई अनलाइन प्रमोट गर्न जारी राख्न सक्नुहुन्छ, तर त्यहाँ कुनै प्रयोग छैन किनकि तपाइँले कुनै बिक्री वा प्रयोगकर्ता संलग्नता प्राप्त गर्नुहुन्न।
गुगल एनालिटिक्समा सेगमेन्ट कसरी सिर्जना गर्ने?
यदि तपाईं गुगल एनालिटिक्समा सेगमेन्ट्स निर्माण गर्न चाहानुहुन्छ भने, तपाईले सबैभन्दा पहिले गर्नु पर्ने कुरा भनेको फिल्टरलाई सम्पादन गर्नु र तपाईको साइटको प्रकृतिको आधारमा नाम परिवर्तन गर्नुहोस्। मलाई यहाँ भन्नुहोस् कि क्षेत्रहरू सम्पादन गर्न, मेटाउन वा पुन: नामकरण गर्न सजिलो छ, तर तपाईं वास्तविक डाटा हटाउन सक्नुहुन्न किनकि यसले पूरै तपाईंको वेबसाइटलाई बिगार्न सक्छ। हामी मध्ये धेरैको लागि, सेगमेन्टहरू सिर्जना गर्न यो कहिल्यै महत्त्वपूर्ण भएको छैन, तर यस बाहेक, तपाईंलाई खोजी इञ्जिनहरूबाट गुणात्मक ट्राफिक पाउने आश्वासन दिन सकिदैन।
त्यहाँ दुई मुख्य प्रकारका क्षेत्रहरू, प्रणाली खण्डहरू, र अनुकूलन खण्डहरू छन्। प्रणाली खण्डहरू त्यो हुन् जुन गुगल एनालाइटिक्समा स्थिर सुविधाहरू र विकल्पहरू प्रदान गर्दछ र तिनीहरूलाई सिर्जना भए पछि परिवर्तन गर्न सकिदैन। तिनीहरू जे होस्, तपाईंको अवतरण पृष्ठहरू साथसाथै सोशल मिडिया प्रोफाइलहरूको साथ समायोजन गर्न सकिन्छ। प्रणाली खण्डहरू उपयोगी छन् किनकि तिनीहरू मोबाइल-अनुकूल छन् र तपाईंलाई मोबाइल उपकरणहरूबाट धेरै दृश्यहरू लिन सक्दछन्। अनुकूलन क्षेत्रहरू अधिक जटिल छन् र प्रणाली क्षेत्रहरू भन्दा कम लोकप्रिय। गुगल विश्लेषकमा छनौट गर्न तिनीहरूले विभिन्न विकल्पहरू पनि प्रस्ताव गर्छन्। उदाहरण को लागी, तपाईले सेग्मेन्टहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईंको वेबसाइटमा seconds० सेकेन्ड भन्दा कम खर्च गर्ने आगन्तुकहरूलाई फिल्टर गर्नुहोस्। तपाईंको वेब पृष्ठहरूमा देश लक्षित दृश्यहरू पाउनका लागि क्षेत्रहरू सिर्जना गर्न पनि सम्भव छ। यो सबै तपाइँको साइट को समग्र प्रदर्शन सुधार हुनेछ, र तपाइँको ट्राफिक को गुणवत्ता पूरै सुधार हुनेछ।